DHAGEYSO Dib u eegista Dastuurka Soomaaliya oo la shaaciyay xiliga la soo gabagabaynayo. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Dib u eegista Dastuurka Soomaaliya oo la shaaciyay xiliga la soo gabagabaynayo.
Anwar Mohamed October 12, 2018
Gudoomiyaha gudiga dib u eegista dastuurka Soomaaliya Senator Cabdi Xassan Cawale qaybdiid ayaa sheegay inay dadaal dheeraad ah ku bixinayaan dhamaystirka howlaha dib u eegista ah ee hada ay ku wadaan Dastuurka Qabyada ah ee dalka Soomaaliya.
Senator Qaybdiid ayaa sidoo kale tilmaamay in ugu danbayn dabayaaqada sanadka soo socda ee 2019-ka ay baarlamaanka u gudbin doonaan cutuyada Dastuurka Soomaaliya ee ay dib u eegistiisu hada Socoto baarlamaankuna uu qaadan doono go’aanka ugu danbeeya ee ku aadan dhamaystirka xeerka qaranka.
Magaalooyinka waa weyn ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay shirar looga hadlayay dhamaystirka Dastuurka KMG Soomaaliya waxaana ugu danbeeyay shirkii maalin ka hor lagu soo gabagabeeyay magaalada Garowe ee caasimada u ah maamulka Puntland qodobadii shirkaas laga soo saaray ayaana waxaa ka dib ahaa in dhamaan hogaamiyeyaasha Soomaalidu ay hal meel uga soo wada jeestaan qorshaha lagu dhamaystirayo Dastuurka Qabyada ah.
← DHAGEYSO Maamulka degmada Balcad oo ka hadlay dhibaatada dadka deegaankaas haysata.
Dhageyso Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay. →
Kulan ay isgu imaanayaa madaxda Soomaalida iyo kuwa caalamka oo muqdisho ka furmaya. February 18, 2019
Qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho oo saaka xiran. February 18, 2019
Australia oo sheegtay in lagu hayo farogelin shisheeye February 18, 2019
Kalkaaliyaasha oo shaaciyay ismaamulada maanta ay shaqa joojinta ka billaaban doonto February 18, 2019
soomaalida ma leedahay eedaha loo jeediyo February 18, 2019
Diiwaangelinta dijitaalka ah ee Kenyaanka oo maanta billaabanaysa February 18, 2019
DHAGEYSO WARKA HABEENIMO EE IDHACADA STAR FM.17.2.2019 February 17, 2019
Dhaxalsugaha Sacuudiga oo gaaray Pakistan February 17, 2019
Guddiga dhaqaatiirta dalka oo baaraya dhimashada 60 dhallaan ah February 17, 2019
Dowladda soomaaliya oo ka hadashay muranka kala dhexeya Kenya February 17, 2019
Kulan ay isgu imaanayaa madaxda Soomaalida iyo kuwa caalamka oo muqdisho ka furmaya.
Qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho oo saaka xiran.
Australia oo sheegtay in lagu hayo farogelin shisheeye
Kalkaaliyaasha oo shaaciyay ismaamulada maanta ay shaqa joojinta ka billaaban doonto
soomaalida ma leedahay eedaha loo jeediyo
Diiwaangelinta dijitaalka ah ee Kenyaanka oo maanta billaabanaysa
DHAGEYSO WARKA HABEENIMO EE IDHACADA STAR FM.17.2.2019
Dhaxalsugaha Sacuudiga oo gaaray Pakistan
Guddiga dhaqaatiirta dalka oo baaraya dhimashada 60 dhallaan ah
Dowladda soomaaliya oo ka hadashay muranka kala dhexeya Kenya